Indikator-VirtualBox na ny fomba fandefasana milina virtoaly nefa tsy manokatra VirtualBox | Avy amin'ny Linux
Indikator-VirtualBox tsotra izany mari-pamantarana ho an'ny tontonana GNOME izay mamela ny fandefasana ireo milina virtoaly nampidirinay tao amin'ny VirtualBox mivantana avy amin'ny birao. Izy io dia miasa miaraka amin'ny VirtualBox sy VirtualBox OSE.
Na dia azo atao aza ny mamorona hitsin-dalana ho an'ny tsirairay amin'ireo milina virtoaly ampianay amin'ny VirtualBox, ity fomba ity dia tsotra kokoa satria manalavitra ny lahasa tsy maintsy mamorona, manavao na mamafa ireo hitsin-dàlana ireo. Ho fanampin'izay, dia verosa kokoa io satria ny milina rehetra dia voatanisa rehefa manindry ny kisary famantarana.
Mba hanampiana ity programa ity dia mila ampiana ny WebUpd8 PPA (bilaogy amin'ny teny anglisy momba ny Linux) izay misy koa ny fanavaozana ireo programa malaza maro hafa. Ireo kinova hita ao amin'ity PPA ity dia ho an'ny Ubuntu (Lucid, Maverick ary Natty):
sudo apt-mahazo mametraka tondro-virtualbox
Raha mihazakazaka dia mamaky ny ALT + F2 ary mitendry: tondro-virtualbox.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Indikator-VirtualBox na ny fomba fandefasana milina virtoaly nefa tsy manokatra VirtualBox
Dasinex dia hoy izy:
Valio amin'i Dasinex
cpcbegin dia hoy izy:
Safidy iray hafa ny famoronana hitsin-dàlana amin'ny birao miaraka amin'ny baiko manokatra ny milina virtoaly ary mampandeha azy ho anao.
Ohatra, manana fidirana antsoina hoe "FreeDOS Compatibility" aho izay manondro ny baiko "virtualbox -startvm" Free DOS '-mode sdl' izay mamela ny fikitihana indroa hanokatra ny rafitra fiasa voalaza (amin'ity tranga ity Free DOS) mangarahara tokoa amin'ny ny mpampiasa.
Mamaly amin'ny cpcbegin
Marina indrindra. Ny olana amin'ity safidy ity dia ny hoe "sarotiny" kokoa ary ankoatr'izay dia tsy manavao azy ho azy izy io rehefa mamafa na mamorona milina virtoaly vaovao. Na izany na tsy izany, safidy tsara izany raha toa ianao tsy maniry ny mametraka programa hafa izay manohy mitazona ny habaka disk anao. 🙂
Miarahaba ary misaotra betsaka anao nanome hevitra!
Carlos Uc dia hoy izy:
Misy mahalala ny fomba hametrahana ity saina ity amin'ny ubuntu 13.04 ??
Lany andro ny tahiry: S
Valiny tamin'i Carlos Uc
Nahita fomba hametrahana azy amin'ny ubuntu 13.04 aho !! Vao avy nohavaozin'izy ireo tao amin'ny launchpad ity tahiry ity. Ampio izy dia miasa. Amboary ny lahatsoratra raha te hanavao azy
Ubuntu 11.04 Natty Narwhal Alpha 1 misy!